Manazava ny Semalta hoe Nahoana no Mampitombo ny Vola ny Fampiasana Asa Fanoratana
Ny mpanjifanay dia nanamafy fa ny tombony amin'ny fampiasana ny dokam-barotra momba ny orinasanaona tranokala e-commerce mihoatra lavitra noho ny vidiny. Rehefa mivoaka ny lahatsoratrao, dia tonga izanyFitaovana maharitra eo amin'ny aterineto izay manondro anao foana. Tetik'asa iray voafaritra tsaraNy votoaty dia fitaovana manan-danja izay manome tombony ho anao mahomby.
Raha te-hanatsara ny lozam-pikarohana fikarohana momba ny fiainanao manokana ianao,na tranonkala e-commerce, ny tolotra fanoratana lahatsoratra dia mety hahasoa anao indrindra. mampiasaIty karazana tolotra ity dia hanafoana ny asa matanjaka amin'ny fanaovana fikarohana, fanitsiana, fanoratana,ary ny famakiana ny famakiana dia mitaky fampahalalana mba hamenoana ny votoatin'ny lahatsoratra - Ivan Konovalov, tompon'andraikitra mpitantana ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt Fomba fiasan-tserasera, mizara ny fahaiza-manaon'ireo tombontsoa azo avy amin'ny fanoratana lahatsoratra momba ny asa aman-draharahanao.
Raha mampiasa serivisy matihanina ianao, dia hanana toetra tsara noforonina ho anao - umzugsunternehmen versicherung.Izany dia manatsara ny marikao ary manome ny mety ho mpanjifa tsara tarehy tsara indrindraamin'ny tranokalanao. Ny mpanoratra profesora dia mahafantatra ny fomba hanoratany votoatiny mazava sy azo antoka ao amin'ny fiteny izay hahafantaran'ireo mpanjifanao tsara indrindra
Ny asa fanoratana lahatsoratra dia miantoka ny asa orinasa. Ny asa voalohany dia tena zava-dehiberaha toa ka mijery ny fizotry ny motera fikarohana satria ny sariohatra fitadiavana dia hanasazy anao rahaTapa-kevitra izy ireo fa efa nahavita kopia ianao ary nametraka lahatsoratra hafa na fizarana amin'io lahatsoratra io ho tombontsoanao manokana..
Ireo lahatsoratra voarakitra an-tsoratra dia azo ampiasaina ihany koa mba hanomezana votoaty mahasoapejy web. Ny mpanjifany dia manamarika ny fanombohany (mety tsy misy) ny fahatsapana momba anao amin'ny votoatinyao amin'ny tranokalanao. Ny fahatakarana izany dia hametraka tanteraka ny tongotrao tsara indrindra ianaoNy fivarotana ny mpanjifa amin'ny fikitihana ny rohy izay hitondra azy any amin'ny pejin'ny fanatanjahanao.
Ireo mpanoratra profesora dia voaofana hanatsara ny tranokalanao, izay manome antoka kokoafitadiavana motera fikarohana. Ny fikarohana fikarohana dia zavatra azo ataoianao mba hianatra, fa ny fotoananao dia tena sarobidy, ary mety ho tianao ny hifantoka aminaoNy angovo eo amin'ny fitazonana ny raharaham-barotra izay misy ny tranonkala.
Ho afaka hividy lahatsoratra ianao mikasika ny foto-kevitra rehetrana orinasa fandraharahana. Azonao atao ny mampiasa lahatsoratra mahasoa mba hanomezana mpanjifaizay mitsidika ny fampahalalam-baovao momba ny sehatra, na azonao apetaka amin'ny sehatra fiadian-kevitra,lahatsoratra, tranonkala, tranonkala media sosialy, ary bilaogy. Hanampy anao izanymanangana ny fahamendrehanao ho manam-pahaizana amin'ny saha na ny tambin-tsainao.
Ireo mpanoratra profesora dia afaka manoratra amin'ny fomba maro samihafamba hifandraisanao tsara amin'ny mpihaino anao. Ataovy ao an-tsaina fa hanana lahatsoratra ianaomifampiresaka mivantana amin'ny mpanjifa voatokana amin'ny fiteny iray izay izyhahatakatra. Raha tsy afaka mahazo hafatra mazava sy mazava ianaony mpividy dia tsy ho azonao mihitsy ny orinasany.
Azonao atao ihany koa ny mampiasa mpanoratra mpanoratra lahatsoratra mba hamenoana ny lahatsoratraomba hiresaka amin'ny mpihaino marobe amin'ny mpihaino anao. Tetika izanyizay maka ilay lahatsoratra fanoratana ny matihanina dia ho afaka hampiasa amin'ny tanjaka feno.
Tsarovy fa ianao dia mifaninana amin'ny tompon'ny tranonkala an-tapitrisany amin'ny aterineto.Tsy maintsy mampiasa ny fotoana rehetra azo atao mba hahazoana tombontsoa amin'ny fandraharahana. IndraindrayNy mpanjifa dia hijery tranonkala maro raha toa ka mitady hividy izy. Thetraikefa amin'ny manaporofo ny manam-pahaizana Semalt , fa ny tranonkala manana votoaty miavaka dia mandresy foanany ady, mandray ny raharahanao amin'ny ambaratonga manaraka.